Ulaha ugu fiican ee soo saaraha iyo Warshadda | Gimarpol
Faa'iidada: Nooca caanka ah ee caanka ah, tayada sare leh, kormeerka adag iyo tijaabada, adeegga iibka kadib.
Wakhtiga la bixinayo: 3 dav kadib markii la xaqiijiyay laamiga
Cadad Miisaanka culus (kg)
Millimitir (mm) Cagta
Q1: Ma dooran karnaa badhanka xoogaa midab ah?
Q2: Miyaynu u beddeli karnaa calaamadeena waxoogaa badhanka ah?
Q3: Ma haysataa adeegga iibka kadib iyo adeegga dammaanadda?
Q4: Miyaan ku kalsoonaan karaa shirkaddaada?
Hore: Dhuxulada miinooyinka
Xiga: Adkeysiga Shank